Kedu ka Njikọ ahụ si arụ ọrụ maka Ogwe Nri?
Mgbe ị na-ahọrọ ogwe ụda, jide n'aka na ị họrọ otu na njikọ ziri ezi maka TV na ihe ndị ọzọ. E nwere ụzọ abụọ dị nkenke iji mee ka ogwe ụda rụọ ọrụ na sistemụ gị. Zọ kachasịsịsịsịsịsịsịsị bụ iji TV gị dị ka ebe mgbanwo ọkụ: ị jikọọ ihe ọkpụkpọ Blu-ray gị, eriri o ...
Soundda Bda Ogwe Na-arụ Ọrụ Maka Egwu?
N'iji egwu egwu egwu na-ewu ewu, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ogwe ụda ugbu a na-enye ike ahụ. Wuru na-Bluetooth® na-ahapụ gị enuba music mfe site na gị ama, mbadamba, ma ọ bụ Bluetooth-ike kọmputa. Ọ na-arụ ọrụ na egwu echekwara na ekwentị gị ...
Steereo ma ọ bụ gburugburu olu?
Ọ bara uru ikwugharị na ụda mmanya ọ bụla ga-ada ụda karịa TV gị. Basic ụda Ogwe agbasaghị ịbụ stereo aghụghọ na mụta nwa otu aka nri na ekpe ọwa ọdịyo ọmụma dị ka gị TV. Ma ha na-ada ụda nke ukwuu karịa ka nnukwu ndị ọkà okwu kwadoro site na ampl ...
Ogwe ụda ma ọ bụ Ntọala ụda?
Ruo ugbu a, anyị na-ekwu okwu maka ogwe osisi nke nwere ogologo ogologo ogologo ogologo nke otu mmanya. Mana enwere ụdị ọzọ: ụdịrị mkpọda ikpo okwu, a na-akpọkwa ya ụda isi mgbe ụfọdụ. Widedị obosara a, nke dị ala na-anọdụ n'okpuru TV gị ma kwado ya. Ndabere ụda nwere s ...
Gini banyere Subwoofer maka Ogwe Uda M?
Ọ bụrụ n ’ị chere na ị ga-achọ igwe mkpọtụ nwere ya na subwoofer na - eso ya, nke ahụ nwere ike belata nhọrọ nnabata gị ntakịrị, mana ikekwe karịa ihe ị tụrụ anya ya. Nke ahụ bụ n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ subwoofers ndị a niile bụ ikuku. Nke ahụ bụ, ha na-enweta akara ụda site na ikuku site na ...
Ebee Ka Plan na-eme atụmatụ itinye ụda gị?
Mara ebe ị ga-etinye ụda mmanya gị ga-eme ka mkpebi gị dị mfe ma mekwaa nhọrọ gị. Enwere nhọrọ abụọ dị mkpa. Ọ bụrụ na TV gị kwụgidere na mgbidi ị nwere ike ịdọnye ụda mmanya dị n'okpuru ya maka ọdịdị dị mma, nke na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị goin ...
Gịnị Mere M Ji Chọrọ Barda Ogwe?
Barsda ogwe agbawaala na ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnụ ọgụgụ nke ụdị agbawaala n'otu aka ahụ. Ya mere, anyị etinyela usoro ịzụ ahịa a iji nyere gị aka ịchọpụta ngwa ngwa ụda mmanya nwere ike ịba uru maka gị. Ogwe ụda bụ usoro okwu okwu niile na ...
Gịnị Bụ Ogwe Uda?
Ogwe ụda dị adị maka TV dị larịị ... ọ dịkarịa ala ruo n'ókè ụfọdụ. O doro anya na ihe ngebichi ndị ahụ mepụtara foto doro anya. Ma obere ndị okwu ha, nke etinyere n’ime ha enweghị ike mụta nwa mkparịta ụka nke ọma, obere ihe ga-eweta mgbawa kwenyesiri ike, mkpọka ụgbọala na ihe niile ...
Ndị na-ekwu okwu Wifi Soundbar, Tv Soundbars, WiFi Soundbar N'ihi Tv, Ugwu Tv na Soundbar, Alexa Soundbar, Karaoke Soundbar,